Ribbaadhista (hagaajinta xajiyeyaasha)
Caaggu waxaa badanaa loo isticmaalaa hagaajinta tuubooyinka, tuubooyinka iyo fiilooyinka.
Xawaare yar-yar oo xirxiran
Qalabka Mini qabatinku wuxuu leeyahay xoog waara
Tuubada biyaha culus ee culus waxay ku dhegaan caag
Tuubbooyinka culus ee xaabada leh ee dheemanka leh ayaa isku xiraya gaar gaar ah oo loogu talagalay hagaajinta dhuumaha.
Laba laab tuubada xargaha siligga
Isku haynta labada weji ee siligga ayaa laga heli karaa laba qalab. Dhexroorrada xargaha ayaa kala duwan marka loo eego cabirka. Cabbirka aan ku qornayn shaxda waa la dejin karaa.
Labada dhegood ee garaaca wadnaha
Qalabka dhegaha-laba-geeska ah ayaa si gaar ah looga sameeyay tuubooyin bir-qabte ah oo tayo sare leh, oo dusha sare waxaa lagu daaweeyaa zincani tayo sare leh oo tayo sare leh.
Xirmooyinka tuubbada biriijka ayaa si gaar ah loogu talagalay bakeeriyada, tuubooyinka ayaa u wareegaya dhanka bidix iyo midig si ay u sameeyaan kaarka ugu fiican oo shaabad ku daboolan tuubada sag.The tuubada sidoo kale waxaa lagu xiri karaa daboolka boodhka, albaabka-caddeynta qaraxa, isku xirka iyo waxyaabaha kale ee lagu dhejiyo si ay u noqdaan adag oo nidaamka qashinka ururinta adag. Naqshaddii buundada waxay awood u siineysaa xoog inuu si toos ah u galo tuubada, isagoo si sahlan u riixa tuubada xirmo aamin ah iyo xiriir. Dhismaha bir aan cillad lahayn oo waara.